Tim Cook na-echeta Steve Jobs na ụbọchị ọmụmụ 62nd ya | Esi m mac
N'ụbọchị dị ka ụnyaahụ, February 24, Steve Jobs ga-eruworị afọ 62. N'ihi nke a, onye isi ụlọ ọrụ ugbu a, Tim Cook, chọrọ icheta ọnụọgụ onye bụ onye nkwado ngalaba Apple na onye bu ya ụzọ n'ọfịs, site na ozi edepụtara na akaụntụ Twitter nke ya.
Ememe ncheta a dabara ụbọchị ole na ole Apple kwuchara nke ahụ Ulo akwukwo ohuru a ga amalite oru n’onwa april nke ụlọ ọrụ dị na Cupertino, nke natara aha gọọmentị nke Apple Park ma nwee oghere pụrụ iche akpọrọ Steve Jobs aterlọ ihe nkiri.
Nwa nwoke nke onye si mba Syria, nkọwa nke na-adịghị mma icheta n'oge a na-agafe United States, a mụrụ Steve Jobs na February 24, 1955. Ọnwa Iri 5, 2011, ọnwa ole na ole ka ọ hapụsịrị ọkwa ya dịka CEO nke Apple n'aka Tim Cook, na mgbe o gosipụtara ihe ga-abụ iPhone mbụ ya, iPhone 4s, Steve Jobs nwụrụ n'ọrịa kansa.
Nyaahụ, na-amalite ụbọchị na American West Coast, Apple CEO Tim Cook tweeted ozi na ebe nchekwa nke Apple ngalaba-nchoputa Steve Jobs, onye gaara agbanye 62.
Icheta Steve, onye okwu ya na echiche ya ga agba anyị ume mgbe nile. "Enweghị ihe kpatara ịghara ịgbaso obi gị."
Naanị ụbọchị ole na ole gara aga, Apple kwupụtara na ụlọ ihe nkiri ọhụrụ na ogige ọhụrụ ya na California, Apple Park, ga-abụ aha Steve Jobs Theater.
Iji kwanyere ncheta ya na mmetụta ya na-adịgide adịgide na Apple na ụwa, a ga-akpọ ụlọ ihe nkiri dị na Apple Park Steve Jobs Theater. Na-emepe ma emechaa n’afọ a, ọnụ ụzọ ụlọ ezumezu nke otu puku oche bụ ụkwụ 1.000 n’ogologo, 20-inch n’obosara nke na-akwado igwe eji eme ka eriri igwe. Jolọ ihe nkiri Steve Jobs dị n'elu ugwu - otu n'ime ebe kachasị elu n'ime Apple Park - na-ele ala ahịhịa ndụ na isi ụlọ.
Apple nwere a página ebe ihe karịrị nde mmadụ ekenyela echiche ha banyere Steve Jobs.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Tim Cook na-echeta Steve Jobs na ụbọchị ọmụmụ 62nd ya